Samsung gosipụtara data nzuzo nke ọtụtụ nnukwu ọrụ | Gam akporosis
Samsung kpughere data dị nro, nzere na koodu isi nke ọtụtụ nnukwu ọrụ
Dabere na onye nyocha nchekwa, Mossab Hussein, Samsung na-eri data dị nro, dị ka nzere, koodu isi na igodo nzuzo, maka ọrụ dị iche iche dị mkpa.
N’amaghị ama, ụlọ ọrụ ahụ enyewo "Ọhaneze" nnweta faịlụ dị oke egwu na ụlọ nyocha mmepe gị na GitLab, nke ejighi paswọọdụ chedo.
Ihe ngosi ahụ ekpughere nwere ihe nzere maka akaụntụ ọrụ ntanetị weebụ Amazon nke ejiri maka mmepe ọrụ Samsung. Ihe ndi a n’egosiputa ihe nchekwa 100 S3 nke ejikọtara na otu akaụntụ AWS nwere log na data nchịkọta.
Ihe ntinye aka GitLab nke ndị ọrụ bụkwa akụkụ nke data dị nhịahụ achọpụtara. Onye nyocha nchekwa ahụ nwetara ohere dị iche iche nke ọha na nke onwe ya na akara ngosi nnweta, na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ekpughere site na 43 ruo 135. "Enwere m akara aka nke onye ọrụ nwere ohere ịnweta ọrụ 135 niile na GitLab ahụ" Mossab na-ekwu Hussein.
Imirikiti faịlụ ndị mmadụ na-ahụkarị nwere data metụtara Samsung's SmartThings na Bixby ọrụ. Ọ nwere ike ịbụ "ọdachi" ma ọ bụrụ na ụfọdụ onye omee ọjọọ jikwa koodu ahụ.
Samsung na-akwado ọtụtụ ọrụ na Vandev Lab, ụlọ ọrụ GitLab nke ụlọ ọrụ maka ebumnuche mmepe. Otu nchekwa ahụ nwere ọrụ dịka Samsung's SmartThings platform and Bixby services.
Samsung gosipụtara ihe mmetụta igwe ọhụụ ọhụụ ruru 64MP
Otú ọ dị, Samsung ugbu a kagburu igodo niile na nzere na nyocha usoro. Companylọ ọrụ ahụ na-eme nchọpụta iji chọta ihe akaebe nke nnweta mpụga ọ bụla mgbe ihe a mechara.
Mgbe emechara ihe a niile, lọ ọrụ ahụ ga-etinye usoro nchebe siri ike na ụlọ nyocha ya niile, n'ụzọ doro anya, nakwa na mpaghara ndị ọzọ meghere ndị na-ege ntị dị iche iche, na ebumnuche na ihe yiri nke ahụ agaghị eme ọzọ n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung kpughere data dị nro, nzere na koodu isi nke ọtụtụ nnukwu ọrụ
Telegram emelitere na a ọhụrụ imewe na Archived chats, ndị ọzọ na ndozi
Huawei weputara gam akporo Q Beta maka Mate 20 Pro